“ရွှေမြန်မာ”: January 2009
ကျွန်မဆီကို မေးလ်ပို့ပြီး ဆိုက်မှာ တင်ပေးဖို့ ပြောလာလို့ အားလုံးသိရအောင် ပြန်တင်ပြလိုက်တာပါ။ လောကမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ... လူ လူချင်း မစာနာ၊ နှမသားချင်းမစာနာ လုပ်နေကြတာ ဘယ်ဥက ပေါက်တဲ့သူတွေလဲဆိုတာတော့ ခုလို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေသာ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မဆီကို ပို့တဲ့အတိုင်း ပြန်လည် မျှဝေ သတိပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆီ ရန်ကုန် က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် mail ပို့ လာလို့ ။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း က သူ့ အစ်မ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော့ ကိုပြောပြတယ်
ဒါကြောင့် ငါလည်း ဒီစာလေးကို
BLOG တစ်ခုကို ရင်ထဲက ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တွေ အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိူင်ခွင့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း မင်း ဆီကိုပဲရေးပို့ လိုက်တယ်ကွာ
သင့်၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများကို အသိပေး နှိုးဆော်ပေးခြင်းဖြင့်
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ မှူ့ ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမိန်းကလေးများရဲ့ ချစ်မြတ်နိူးစရာ စရိုက်လေးတွေနဲ့့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြိုင်စံရှား အရမ်းကို အရှက်အကြောက် ကြီးမားတတ်ကြတဲ့
လူမဆန်စွာယုတ်မာရိုင်းစိုင်းနေကြပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရား နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကင်းမဲ့နေကြတဲ့ သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေမှ မိမိတို့ တတ်အားသ၍ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် ပေးစေလိုပါကြောင်း
ကျွန်မက မိတ်ဆွေများအားလုံးကို တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ။
ကိုယ့်အန္တာရာယ်ကိုကိုယ် ဂရုတစိုက်နဲ့ သတိထားရင်း ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါလို့ ကျွန်မ ထပ်ပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ မ၀ယ်တော့ ရှောင်လို့ရတယ် ဟိဟိ။
----- သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အီးမေးပို့လိုက်လို့ သူငယ်ချင်းများထံ မျှဝေလိုက်ပါတယ် --------
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 30, 2009 No comments: Links to this post
ခုတစ်လော ဘာမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်၊ အလုပ်မှာလည်း မပျော်.... စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ဘယ်လို ခေါ်လည်းဆိုတာတောင် ပြန်စဉ်းစားရပြီ။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတောင် မညည်းတွားချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့်လည်း သူများတွေ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး။ ပျော်နေတယ်လို့ ထင်နေတာလား။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား မပြောချင်ပါဘူး။ အပြုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ အများကြီး ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ မြင်မှမမြင်ကြတာကိုး....... ပြောကြတယ်။ ခုတစ်လော ပြုံးပြုံးနေပါလားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက သူများတွေမတူတာတစ်ချက်က အရမ်းစိတ်ညစ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းစိတ်ညစ်ရင်ပဲ ပြုံးနေတတ်တာ ကျွန်မအကျင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ အကြောင်းသိတဲ့သူတွေက သူ ပြုံးနေပြီ သတိထားတဲ့။ တချို့ကလည်း ပြုံးတော့ ပြုံးတဲ့ ပြုံးဖြဲဖြဲ မလုပ်နဲ့တဲ့။ ကျွန်မ ဘ၀ကို အရှုံးပေးတဲ့သူ မဖြစ်ချင်ဘူး။ လောကဓံကို အပြုံးနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံမယ်လို့ လုပ်ထားခဲ့မိတာ။ ကျွန်မရဲ့ညီမလေးတွေက ပြောဖူးတယ်။ အမတဲ့ ဘ၀မှာ ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာတွေပဲ ကြုံကြုံ အပြုံးမပျက်ပဲ အသက်ကြီးတဲ့ထိ နေနိုင်ရမယ်တဲ့။ ဘ၀ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ ပြောတော့သာ လွယ်တာ တကယ် နေထိုင်ကြည့်တော့ တော်တော်ကို မလွယ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ခုတော့ တစ်ယောက်ထဲနေရတာ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့ ဘယ်သူမှလည်း စကားမပြောဘူး။ ပြောလည်းမပြောချင်ဘူး။ ခုတော့ ပြုံးတော့ ပြုံးနေတယ် မချိပြုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတော့တယ်.... ဆိုက်လည်း မလုပ်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတယ်။ နေနိုင်သရွေ့နေကြည့်ဦးမယ်လေ..... ပြဿနာဆိုတာ အဖြေတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းလို့ရတာနဲ့ မရတာပဲကွာတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ထင်သလား။ ကျွန်မတော့ မထင်ဘူး။ ပထမတော့ ကျွန်မ မရေးချင်ပါဘူး။ ကျွန်မကြောင့် လာလည်တဲ့ မောင်နှမတွေ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ဟာ ဒီနေရာပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို စိတ်ညစ်တာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ညစ်လည်း အဖြေရှာတော့ အဖြေတော့ တွေ့ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းခွင့်မရှိဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ပြီးသွားမှာပါလို့ပဲ စိတ်က ဖြေမိတယ်။ အင်း ဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်။ စိတ်ညစ်ပြီး ပြန်သွားပြီလား.... အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, January 27, 20092comments: Links to this post
အမြော်အမြင် ဥာဏ်ပညာဆိုတာ မလိုတမာရှိတဲ့စိတ်ထဲကို ၀င်ရောက်မလာပါဘူး။
we think we're sick,
အချိန်တိုင်းလိုလိုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ နေမကောင်းဘူးလို့ တွေးနေတတ်တယ်။ အဲဒီအတွေးဟာ စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတယ်။
We are, perhaps, uniquely among the earth's creatures, the worrying animal. We worry away our lives, fearing the future, discantent with the present, unable to take in the idea of dying, unable to sit still.
And we are here as onadarkling pkain swept with cenfused alarms of struggle and flight,
It is common sense to takeamethod and try it. If it fails admit it frankly and try another. but above ally try something.
နည်းလမ်းတစ်ခုကို ယူပြီးလုပ်ကြည့်တာက ဘ၀ပေးအသိဖြစ်တယ်။ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံလိုက်ပြီး နောက်တစ်နည်းနဲ့ ကြိုးစားပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ တစ်ခုခုကို ကြိုးစားနေပါ။
မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ကုထုံးမရှိပါ။ ကြားကာလကို မွေ့လျော်ဖို့ အချိန်ကို ဖယ်ထားပါ။
People diving deeply have no fear of dedth.
ဘ၀ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နေနေကြသူတွေမှာ သေခြင်းကို ကြောက်ရွံ့မှု မရှိကြပါ။
And Certuin is birth for the dead;
Therefore over the inevitable,
Thau Shouldst not grieve.
သေခြင်းဟာ မွေးဖွားလာသူအတွက်ဆိုတာ ယိုးမှားဖွယ်မရှိပါ။ ထို့အတူ မွေးဖွားခြင်းဟာ သေဖို့ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါ။ ဒါတောင် ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အပေါ်မှာ သင်တို့ ပူဆွေးသောက ဖြစ်နေစရာ မလိုပါ။
Is There "cure" forabroken heart?
Only time can heal your broken heart,
just as only time can heal his broken arms and logs.
အသည်းကွဲတာကို ကုသနိုင်တဲ့ဆေး ရှိပါသလား။
သူရဲ့ ကျိုးသွားတဲ့ခြေတွေ၊ လက်တွေကို အချိန်က ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်သလို ကွဲနေတဲ့ သင့်ရဲ့အသည်းကိုလည်း အချိန်က ကုစားပေးပါလိမ့်မယ်။
but pardon error
ဒါပေမယ့် အမှားကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, January 26, 2009 No comments: Links to this post
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်သည် သူ၏ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှု အောင်မြင်သည့်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်နေသည်။ ပါတီ တက်ရောက်လာသော သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးက သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်ကို
ဆရာ အောင်မြင်မှုဟာ ဆရာရဲ့ကံကြောင့်လား။
ကံ မလို့ ကျုပ် အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်အောင်မြင်မှုရဲ့ အကြောင်းတရားကို ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥာဏ်က တစ်အောင်စလောက်ပါပြီး ၀ီရိယက တစ်တန်လောက်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 23, 2009 1 comment: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, January 20, 20092comments: Links to this post
မိန်းမတို့ ချစ်လိုသော `ချစ်သူကောင်း၊ ခင်ပွန်းကောင်း`
၁။ ပေးနိုင်ခဲသော ပစ္စည်းကို ပေးရဲ၏။
၂။ ပြုနိုင်ခဲသော အမှုကို ပြုရဲ၏။
၃။ သည်းခံနိုင်ခဲသော ပြဿနာကို သည်းခံရဲ၏။
၄။ လျှို့ဝှက်ခဲ၏။ ပွင့်လင်း၏။
၅။ ဇနီး ခင်ပွန်း၏ လျှို့ဝှက်မှုကို သိမ်းဆည်း၏။
၆။ ရန်ဘယာရှိသောအခါ ဇနီးအား မစွန့်ပယ်၊ ရဲဝံ့၏။
၇။ ဥစ္စာချို့တဲ့ ကုန်ခန်းသဖြင့် လည်းကောင်း၊ အရွယ်လွန်သဖြင့် လည်းကောင်း မငြိုငြင်၊ မထီမဲ့မြင် မပြုသော
၁။ မပျင်းရိ၊ လုံ့လကြီး၏။
၂။ ကြမ်းတမ်းမှု မရှိ၊ ချိုသာ၏။
၃။ စဉ်းလဲမှုမရှိ၊ ဖြောင့်မှန်၏။
၄။ စင်ကြင်သန့်စင်သော ကိုယ်စိတ်အမူအရာများရှိ၏။
၅။ မှန်သော စကားမြဲ၏။ ကတိသစ္စာရှိ၏။
၆။ အရာရာ၌ မက်မောမှု လောဘနည်း၍ စီးပွားအရာ၌ သမာအာဇီဝ မျှတစွာရှိ၏။
၇။ သိမ်းဆည်းတတ်၍ တိုးပွားအောင်လည်း လုပ်တတ်၏။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 16, 20094comments: Links to this post
မြန်မာကာတွန်းဝါသနာရှင် လူငယ်လေး လေးဦး ဦးဆောင်တည်ထောင်ထားတဲ့ 969 Graphic & Animantion Studio ရဲ့ မြန်မာအွန်လိုင်းဂျာနယ်ကာတွန်းလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့နော်။ 969toons.com website ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းရှိ Asia Plaza Hotel ၌ ကျင်းပရာ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ စာရေးဆရာကြီးများ၊ ကာတွန်းပညာရှင်ကြီးများနှင့် စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အခမ်းအနားမှာ စာရေးဆရာကြီး မောင်ဆုရှင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ကာတွန်းတွေ ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ကာတွန်းကို ဘယ်သူတွေက စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးငွေကြည်က ကာတွန်းလောကအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာအွန်လိုင်း ကာတွန်းဂျာနယ် 969toons.com website ဖွင့်ပွဲတည်ထောင်ရခြင်းအကြောင်းကို 969 Graphic & Animation Studio ဦးဆောင်သူ ဒီဇိုင်နာ မောင်သက်ပိုင်ခက ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ ဖြစ်ကြတဲ့ မောင်နန္ဒလှိုင်မြင့်၊ မောင်မျိုးသူရထွန်း၊ မောင်မိုးဥာဏ်သစ်တို့က မေးသမျှ မေးခွန်းတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါတယ်။
မြန်မာအွန်လိုင်းကာတွန်းဂျာနယ်မှာ မြန်မာကာတွန်းဆရာကြီးအချို့ရဲ့ ကာတွန်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပြီး မြန်မာကာတွန်းလောကရဲ့သတင်းနှင့် သမိုင်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်တဲ့။ လူငယ်လူရွယ်လေးတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုတစ်ရပ်လို့လည်း ဆိုလို့ရတာပေါ့နော်။ ကာတွန်းတွေကိုလည်း အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာနှင့် တင်ဆက်ပြထားပြီး
ကာတွန်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အထူးအစီအစဉ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသေးတယ်ဆိုပဲ။ အင်း ကာတွန်းဆိုတာကလည်း လူငယ် လူကြီး ကလေးအရွယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာကိုး။ ကျွန်မလည်း ကာတွန်းကို ငယ်ငယ်လေးထဲက သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိတယ်။
ကာတွန်း ဦးဘဂျမ်းပုံတွေဆို အရမ်းကြိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှဆို ဦးတင်အောင်နီတို့၊ ဦးမြေဇာတို့၊ ဦးငွေကြည်တို့၊ နောက် အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းတွေကိုလည်း အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ သရုပ်ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားတွေကို ပုံတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတာ အရမ်းသဘာဝကျပါတယ်။ အဲ ပြောနေတာတောင် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ ကာတွန်းချစ်သူတွေအတွက် Wallpaper comic E-book တွေကိုလည်း အခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့ လက်ရာတွေကို download ဆွဲယူနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင် တစ်နည်းတစ်ဖုံနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြတာဟာ တကယ်ကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်မလည်း ရွှေမြန်မာဆိုတာ ဘယ်လိုပါဆိုတာ တစ်နေ့တော့ ကမ္ဘာကို ချပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေမိပါတော့တယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 16, 2009 No comments: Links to this post
We can compare practice to bottle of medicineadoctor leaves for his patient. On the bottle are written detailed instructions on how to take the medicine, but no matter how many hundred times the patient may read the directions, he is bound to die if that is all he does. He will gain no benefit from the medicine. And before he dies, he may complain bitterly that the doctor wasn't any good, that the medicine didn't cure him. He will think that the doctor wasafake or that the medicine was worthless, yet he had only spent his time examining the bottle and reading the instructions. He hadn't followed the advice of the doctor and taken the medicine. However, if the patient had actually followed the doctor's advice and taken the medicine regularly as prescribed, he would have recovered.
Doctirs prescribe medicine to eliminate diseases from the body. The Teachings of the Buddha are prescribed to cure diseases of the mind and to bring it back to its natural healthy state. So the Buddha can be considered to beadoctor who prescribes cures for the illnesses of the mind which are found in each one of us without exception. When you see these illnesses of the mind. Does it not make sense to look to the Dhamma as support, as medicine to cure your illnesses?
တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကို ဆရာဝန်က လူနာကို ပေးတဲ့ ဆေးပုလင်းနဲ့ နှိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဆေးပုလင်းမှာ ဘယ်လိုသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်တွေပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနာက ဘယ်လောက်ပဲ ညွှန်ကြားချက်ကို ရာချီပြီး ဖတ်ဖတ်၊ ဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ သေဖို့ သေချာပါ့။ ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို သူ ဘာမှခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူက မသေခင်မှာ ဆရာဝန် မကောင်းကြောင်း၊ ဆေးက သူ့ကို မပျောက်စေနိုင်ကြောင်း ပြောချင်ပြောမယ်။ ဆရာဝန်ကို အတုလို့ထင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးကို တန်ဖိုးမရှိလို့ထင်၊ သူ့အနေနဲ့ကတော့ ပုလင်းကို ကြည့်ပြီး ဆေးစာကို ဖတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာ၊ ဆေးကိုလည်း မသောက်။ တကယ်လို့သာ သူဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပြီး ဆေးကို အညွှန်းအတိုင်းမှန်မှန်သောက်မယ်ဆိုရင် ရောဂါပျောက်မှာပေါ့။
ဆရာဝန်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာက ရောဂါပျောက်အောင် ဆေးညွှန်းကြားချက်ပေးတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓမ္မတရားတွေက စိတ်ကို အခြေအနေကောင်း ပြန်ရောက်အောင် ကုသပေးတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပါပဲ။ လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ စိတ်ရောဂါကို ကုသပေးဖို့ ညွှန်ကြားတဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားကို ဆရာဝန်လို့ သဘောထားနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရဲ့ဝေဒနာကို တွေ့တဲ့အခါ အဲဒီရောဂါကို ကုဖို့ တရားဓမ္မကို အထောက်အကူအဖြစ် သဘောမထားသင့်ဘူးလား....
A TREE IN A FORREST စာအုပ်မှ ပြန်လည်တင်ပြထားပါသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, January 12, 2009 1 comment: Links to this post
ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေ
သမီးကို ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ပြုပါ အမေ...
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, January 10, 2009 1 comment: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, January 08, 20095comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, January 07, 2009 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, January 03, 20093comments: Links to this post
စံစားမှုမပါတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းများစွာဖြင့် ဘ၀ထဲကို ၀င်ကြည့်ခြင်း
အဆင်မပြေမှုတွေ များနေတဲ့ ဘ၀မှာ
ဘယ်အရာမှ ငါ အလိုမကျခဲ့
ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ငါတစ်ယောက်တည်း ရရှိနေတာ မဟုတ်ဘူး
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်က အ၀ီစိထိကျဆင်းနေခဲ့
သြော်... ဘ၀ ဘ၀လို့တောင်
နောက်ထပ် ဘာမှ ရယူစရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာ
အားလုံးကို ကိုယ့်လိုပဲ သဘောထားပြီး
အရိုးခံအတိုင်း ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ ငါ့အကျင့်က
ငါ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း လင်းရောင်ခြည်ဟာ
ဘ၀ကို ကျေနပ်စွာ နေတတ်ဖို့အတွက်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, January 03, 2009 1 comment: Links to this post